राजसंस्था प्रतिको अगाध माया मुटुको कुना कुनामा छ ! – Himalitimes
| प्रकाशित मितिः शनिबार, भदौ २८, २०७६
मेरो मन मुटुमा राजा र राजसंस्था प्रतिको अगाध माया र विस्वास छ । त्यही माया,विस्वासले नै मैले आफ्नो छातीमा उनकै तस्वीर कोरेको छु । छातीको बायाँतर्फ स्वर्गीय राजा वीरेन्द्र वीर विक्रम शाहलाई सजायको छु भने, दायाँ भागमा ज्ञानेन्द्र वीर विक्रम शाहको तस्वीर सजाएको छु । परि आए उनकै निम्ति बलिदान दिन समेत म तयार छु ।
नबुझी रिसाउनु र सुन्निएर मोटाउनु एकै हो । जैसा बिज, वैसा पौधा, जैसे बिचार,वैसा कर्म ! आज म केहीकुरा सोध्न चाहान्छु,यो मेरोमात्र नभैइ लाखौ नेपालीको प्रश्न हो । वीरेन्द्र सरकारको बंश नाश हुँदा किन पोष्ट मार्टम गरिएन ? निकै संबेदनसिल र चारैतिरको सुरक्षा घेराभित्र त्यति ठूलो घटना कसरी घट्न पुग्यो ? दोषी को हुन,किन यतिका वर्षसम्म सत्यतथ्य बाहिर आउदैन ? किन घटनाको सबै आरोप ज्ञानेन्द्र शाहमाथि लगाईयो ?
यदी ज्ञानेन्द्र सरकारले नै हत्या गरेको हो ? भन्ने महासयहरुलाई मेरो जवाफ वीरेन्द्र सरकारको बंश नाश हुदा स-परिवार माथि गोलिको बर्षाद भएको कुरा सर्व विविध नै छ । ,र ज्ञानेन्द्र सरकारले नै हत्या गरेको हो भने पटकपटक सत्ता र शक्तिको बाघडोर सम्मालेको गणतान्त्रिक सरकारले किन उनलाई कानुनी कठघरामा उभ्याउन सकेनन् त ?
अर्कोतिर शासन सत्ता बाहिर हुदा,विना सुरक्षा गार्ड ज्ञानेन्द्र सरकारले देश नियाल्दा,जनतामाझ जादा किन हजारौ मानिसहरु भेला हुन्छन होला ?, तर देशका मै हु भन्ने नेतागण प्रधानमन्त्री,राष्ट्रपतिको उपस्थित भएको ठाँउमा सयौ मानिस पनि भेला हुन मुस्किल छ । आखिर के हो त रहस्य ? रह्यो अर्को कुरा पुर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालक छोरा प्रकाश दाहालको निधन हुदा किन पोष्ट मार्टम गरिएन ? त्यस्तै मदन भण्डारीको हत्या भएको भन्ने कुरा सुनिएको पनि वर्षौ हुन लाग्यो ।आखिर सत्यतत्य के हो ? किन सरकार पटकपटक चुकिरहेको छ ?
उहाँको पनि पोष्ट मार्टम किन गरिएन? पटक-पटक एमाले सरकार बन्यो । त्यति मात्र नभएर उहाँकै आफ्नै श्रीमती २/२ पटक राष्ट्रपति बन्दा समेत उचित छानमिन किन गर्न सकिएन ?
यतिमात्र होइन पुर्व प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाको समेत पोष्ट मार्टम गरिएन ,आखिर किन ? यी कुराहरुमा गणतान्त्रिक सरकारको ध्यान कहिले जान्छ ? कि राजा र राजसस्थाकै गाली गरेर देश र जनताको विकास हुन्छ होला त ? सकिन्छ भने आफ्नो शासन व्यवस्था मजबुझ बनाउनुपर्ने हो । देशको विकास गरि जनता खुशी पार्नुपर्ने हो । महँगी,भ्रष्टाचार,बलात्कारका दोषीलाई खोजी खोजी कारबाही गर्नुपर्ने हो । तर सरकार किन यतिका निकम्मा बन्दैछ होला ? पालैपालो सरकार बन्छ ढल्छ ,तर जो जोगी आएपनी कानै चिरिएको भन्ने नेपाली उखान जस्तै सबैले राजा र राजसस्थाकै विरोध गर्नुपर्ने ?
आफ्ना गल्ती र कमजोरी लुकाउन अनेक बाहाना गरेपनि जनताले अब बुझिसके । यो संघीयता र गणतन्त्रको रापले देश र जनताको कल्याण हुदैन । त्यसैले अब फेरि जनता राजा आउ देश बचाउ भन्दैछ्न । समय अझै छ । गणतन्त्र र संघीयतालाई नै विस्वास मान्नेलाई म भन्न चाहान्छु तपाईंहरु सक्नुहुन्छ भने यही व्यवस्थालाई बलियो बनायर देखाउनुहोस । राष्ट्र राष्ट्रियता र राष्ट्रिय स्वाधीनतालाई बलियो पार्नुहोस ,धर्म सस्कृतिको रक्षा गर्नुहोस । आफुना गल्ती लुकाउन किन कहिले जनता ,कहिले राजसंस्थामाथि आक्रोश पोखेर समय बर्बाद पार्नुहुन्छ ?
राजकुमार शाही (ठकुरी)
प्रकाशित मितिः शनिबार, भदौ २८, २०७६ 3:03:35 PM |
Prevसुर्खेत समाज दक्षिण कोरियाको सातौं अधिवेशन सम्पन्न, हिमाली टाइम्स डटकमकर्मी ‘हमाल’ सम्मानित
Nextमुलुकमा फेरि राजसंस्था फर्किन्छ भन्नेहरु मूर्ख हुन:देउवा